China 1000/2000/3000 Progressive Systems Metering Devices ụlọ ọrụ na ndị na -eweta ngwaahịa | Jianhe
Griiz mmanu mgbapụta Mpaghara
Akpaaka mmanụ mgbapụta Mpaghara Mpaghara
Aka mgbapụta Griiz /Mmanụ
Gris Onye nkesa
Onye nkesa mmanụ
Ihe mgbapụta K6 SKF/Plunger
Ngwa 1000/2000/3000 Metering Systems Progressive Systems
Jiri maka sistemụ mmanu na -aga n'ihu (PRG)
Usoro mmanu mmanu na -aga n'ihu nwere mmanu mmanu, ndị nkesa na -aga n'ihu, ngwa pipeline na ndị na -achịkwa ya. Njirimara gụnyere: nha ziri ezi nke olu dabere na dayameta piston na ọrịa strok, nrụnye dị mfe, nhazi na ndozi. A na -eji usoro PRG n'ọtụtụ ebe a na -egwupụta ihe, igwe ihe igwe, igwe igwe, ụgbọ ala, ọdụ ụgbọ mmiri, igwe ihe owuwu na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Mmanụ a na-eji eme ihe sitere na NLGI-000 ruo NLGI-2, ebe nrụgide sistemụ sitere na 20 ruo 45Mpa. Ihe nzacha ahụ bụ 150μ. Enwere nhọrọ nke ngwakọta nke ngalaba, na -esite n'ike oge ruo na nso mmanụ na -aga n'ihu.
Uru: Mwepụta nke ọma - Enwere ike inye nri na nyochaa isi ihe niile n'otu n'otu - nrụnye enweghị nsogbu - Ọ dị mfe ịkọwa nsogbu sistemụ.
1- Ndị na-ekesa usoro 1000/2000/3000 na-ekesa ma were mmanụ ma ọ bụ griiz na-abata na isi ihe. Onye nkesa 100 na -ahụkarị nwere ngalaba mbata, valvụ atọ ruo itoolu na ngalaba njedebe. Otu ọgbakọ nwere ike iru ihe ruru mmanu mmanu iri na asatọ.
2- Ndị na-ekesa usoro 1000/2000/3000 nwere pistin na-amị amị amị amị amịpụtara lelee valvụ. A na -enye nkanka n'ụdị nha atọ. Ike mwepu nke A na -ekpebi ngọngọ site na ịgbanye dayameta piston na ngọngọ valvụ. Valve ngọngọ nwere oghere abụọ dị na nsọtụ ọ bụla nke ọgbakọ (ọpụpụ abụọ ngọngọ). Ha na -ewepụta mwepụta ọpụpụ nke ọpụpụ nke ọ bụla n'ime ụzọ abụọ ahụ n'otu okirikiri valvụ zuru oke.
3- 1000 onye na-ekesa griiz na-aga n'ihu bụ atụmatụ dị elu yana onye na-ekesa mmanụ nwere ezi uche; Enwere ike iji ya na nnukwu nrụgide na ọnọdụ mgbanwe oke okpomọkụ. Enwere ike ijikọ ya na nfuli eletriki na pneumatic iji mepụta otu usoro mmanụ mmanụ. A na-eji ya dị ka onye nkesa nwanyị maka nnukwu ngwaọrụ dị iche iche na ọdụ ụgbọ mmiri nke ngwa, ma ọ bụ maka sistemụ mmanu buru ibu nwere otu ahịrị.
4- Otu ọkọlọtọ ọkọlọtọ nke ndị na-enye ihe mejupụtara “firt chip” piecea “chip chip” ✚ 3-10 ibe. Ọ nwere ike na-enye 3-20 isi mmanụ maka mmanu. Mgbawa na -arụ ọrụ okpukpu abụọ, (mgbe ejiri T mee ihe iji gosipụta ọpụpụ abụọ), enwere ọdụ mmanụ abụọ, na nsọtụ abụọ nke mgbawa na -arụ ọrụ;
5- Rịba ama na maka mgbawa na-arụ ọrụ okpukpu abụọ, enweghị ike igbochi ụzọ ọpụpụ mmanụ,nke ga -emetụta ọrụ ya nke ọma ma mebie onye nkesa. Otu mgbapụta griiz na -arụ ọrụ (mgbe ọnụ ahịa nkọwapụta nke, jiri S gosipụta otu nsị griiz), enwere ọdụ mmanụ, nke nwere ike ịbụ njedebe nke ibe na -arụ ọrụ, na njedebe nke mmanụ ọpụpụ kwesịrị ịdị akpọchiri.
Ngwaọrụ Mita 1000
Chips na -arụ ọrụ Ọdịdị ọkọlọtọ ML/CYC Ọnụ ego ọpụpụ ọ bụla
1000 Pịnye Isi teknuzu paramita
Max Presssure Mpa Ogo mbata Nhapụta Arụ ọrụ mgbawa size (mm) Wụnye anya oghere (mm) Wụnye eri Ogologo A Tinyekwa Pipe dia (mm) Arụ ọrụ okpomọkụ:
25Mpa M10*1 /NPT 1/8 M10*1 /NPT 1/8 54*32*14 18 3-M5 A = 32+N*14 Ọkọlọtọ 6mm -20 ° C ruo +60 Celsius
N C nọmba
Oke nrụgide ọrụ: 25MPa
Nnyefe: 0.08ml/cyc ~ 0.48ml/cyc
Viscosity mmanụ (n'okpuru ọnọdụ okpomọkụ): mmanụ≥N68, griiz: NLGI 000# ~ 2# Ọnọdụ ọrụ: -20 ° C ~+60 ° C
Ogologo oge ọrụ (yana azuokokoosisi): 60cyc/min Max ọrụ ugboro ugboro (na -enweghị azuokokoosisi): 200cyc/min Nọmba Manifold: 3 ~ 8
Tubing: tinyekwa: Φ6mm ogologo: 0.5 ~ 2.5m, uzo mmiri: Φ6mm ogologo: 1.2 ~ 3.5m
Ngwaọrụ Mita 2000
2000 Pịnye Isi ọrụ aka
25Mpa M12*1 .25 M10*1 /NPT 1/8 80*45*19 32 4-M6 A = 43+N*20.5 Ọkọlọtọ 6mm -20 ° C ruo +60 Celsius
Nnyefe: 0.16ml/cyc ~ 1.12ml/cyc
Viscosity mmanụ (n'okpuru ọnọdụ okpomọkụ): mmanụ ≥ N68, griiz: NLGI 000# ~ 2# Ọnọdụ ọrụ: -20 ° C ~+60 ° C
Ogologo oge ọrụ (ya na azuokokoosisi): 60cyc/min Max ugboro ole ọrụ (na -enweghị stem): 200cyc/min Nọmba Manifold: 3 ~ 10
Tubing: Mpụta: Φ6mm ogologo: 1.2 ~ 3.5m
Inlet: Φ8mm ogologo: 1.5 ~ 4.5m Otutu ihe: carbon carbon
Ngwaọrụ Mita 3000
3000 Pịnye Ntọala teknụzụ isi
25Mpa Rp3/8 Rp1/4 128*70*28 47.6 4-M8 A = 57.4+N*28.8 Ọkọlọtọ 8mm -20 ° C ruo +60 Celsius
Nnyefe: 0.4ml/cyc ~ 4.8ml/cyc
Tubing: tinyekwa: Φ8mm ogologo: 1.5 ~ 4.5m
Inlet: Φ10mm ogologo: 1.8 ~ 5.5m Ihe dị iche iche: nchara carbon
Nke gara aga: Companieslọ ọrụ na -emepụta ihe maka Char Lynn Pumps - U -Block Distributors - Jianhe
Osote: Ngwaọrụ mita MVB na -aga n'ihu
Ndị nkesa U-Block Gris
Ngwaọrụ mita MVB na -aga n'ihu
Okwu:No.5 East Beizhuang Road, Haining Economic Development Zone, Jiaxing -Zhejiang, China